Maxaa Looga Hadlay Kulankii Degdegga Ahaa Ee Ay Yeesheen Golaha Wasiirada? – Goobjoog News
Wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyey dhacdadii qaraxii hotel Nasa Hablood 2 oo uu sheegay inay ku geeriyoodeen 27 qof, isla markaasna dad badan laga soo bad-baadiyey hoteelka oo ay ciidamadu u gurmadeen.
Wasiirka ayaa sheegay in 5 maleeshiyada Al-Shabaab ah ay weerarka qaraxa soo qaadaan iyadoo 3 ka mid ah gacanta lagu dhigay oo ay hay’adaha amniga su’aalo weydiinayaan.
Ka soo qaad in Farmaajo iyo Kheyre la weydiiyay: ma mindida gacanta lagu hayo ayaa la idinku bireeyaa mise mindida dhulka taal?
Waxay oran lahaayeen: TAN DHULKA TALL.
Ummadda Soomaaliyeed laguma madadaalin karo wax aan dantood aheyn.
Waa Farmaajo iyo Kheyre kuwa ay tahay in ay tagaan oo kursiga u benneeyaan rag rag ah, rag karti leh, rag aan aheyn khayaali-ku-nool, rag qaan gaar ah oo mudakar ah, rag cagaha dhulka ku haya, araggooduna samada jiro. Rag baanan kara qarankan dhaawaca ah oo dhiig baxaya. Rag aan u dagaallameynin inay jeebka buuxsadaan oo ay u cararaan Yurub iyo Ameerika.
Sanbaloolshe and Saacid are just scapegoats.
Warar ayaa sheegaya in maanta ay ka dhex tafan tahay Farmaajo iyo Kheyre.
Farmaajo ayaa darajo ahaan sarreeya. Laakiin ma ku dhacaa inuu Kheyre u eryo sida loo eryay Saacid iyo Sanbaloolshe?
In Farmaajo uu taa aad uga fekerahayo waa macquul.
Kheyrana dabcan arrinkaa wuu ka tabaabusheysanayaa.
Kee baa labada laga takhalusi doonaa?
Kee baa tuuri doona haraatida kowaad?
Farmaajo ayaa tuuri lahaa, wuuse baqayaa.
Ma waxaan la biqin baa, wixii ka dambeeyay Kacdoonkii Barakeysnaa ee USC?
Taliyeyaasha Nabad Sugidda Iyo Booliiska Oo Xilalkii Laga Qaaday